आइतवारदेखि गुड्ने रात्रिबसकाे भाडा कति पर्छ ? साविकको भन्दा ५० प्रतिशतसम्म बढी लिने - Aarthiknews
आइतवारदेखि गुड्ने रात्रिबसकाे भाडा कति पर्छ ? साविकको भन्दा ५० प्रतिशतसम्म बढी लिने
काठमाडौं । रातको समयमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यही असार १ गतेवाट रात्रिकालीन बस सेवा संचालनमा ल्याउने भएको छ । त्यसका लागि अहिले यतायात व्यवस्था विभाग अन्तिम चरणको तयारीमा जुटेको छ । यतायातसँग जोडिएका संघसंस्था तथा निजी कम्पनीहरुसंग पनि यस विषयमा समझदारी भइसकेको विभागले जनाएकाे छ ।
विभागका सूचना अधिकारी तिर्थराज खनाल भन्छन् ‘हामीले यातायात कम्पनीहरुलाई प्रस्ताव राखेका थियौं, दर्जनभन्दा बढी कम्पनीसँग समझदारी भएको भइसक्यो, सबैले आइतवार रातिवाट गाडी कुदाउँने छन् ।
समझदारीमा आएका सबै बस कम्पनीहरुले राति ९ बजेपछि बस संचालनमा ल्याउने छन् । यातायात व्यवस्था विभागका सवारी शाखा अधिकृत लेवन अधिकारीले हाललाई यातायात कम्पनीलले १ टिप मात्र रात्रिकालिन सेवा दिने बताए । उनले भने ‘९ बजेपछि कम्पनीहरुले थप १ ट्रिप बस सेवा दिनेछन्, एक रुट पुरा गर्न करिब २/३ घण्टा समय लागी हाल्छ, १२ बजेसम्म सडकमा बस देखिएला ।’
विभागका अनुसार रात्रि–बस चलाउन चाहने व्यवसायीलाई सरकारले अतिरिक्त सहुलियत समेत दिने भएको छ । अब रात्रि बस चलाउने संचालकलाई साविकको भन्दा ५० प्रतिशत बढी भाडा लिने अधिकार समेत दिइने भएको छ ।
हाल काठमाडौंमा सार्वजनिक बसहरुले अधिकतंम रातको ८ देखि ९ बजेसम्म मात्र बस सेवा दिँदै आएका छन् । मध्यरातसम्म काम गरेर घर फर्कन, अस्पताल जाने यात्रुले ट्याकसी सावरी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहदै आएको छ ।
यसअघि पनि २०६९ भदौमा रात्रिकालिन बस–सेवा संचालन भएको थियो । ६ महिनासम्म संचालन आएको उक्त सेवा यात्रु नपाएको भन्दै व्यवसायीहरुले बन्द गरेका थिए ।